ဘုရားသမိုင္းေတြနဲ႔ တရားေတာ္ေတြကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္မယ့္ Application ေလး - For her Myanmar
ထည့္ထားလိုက္ပါၿပီရွင္.. ခုပဲ ဖုန္းထဲ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲၿပီး ထည့္လိုက္ပါၿပီ..
ဘုရားသမိုင္းေတြကို သိခ်င္ၿပီဆို Google မွာ ေခါက္ရွာဖို႔က်ေတာ့လည္း ပါဠိအသံုးအႏႈန္းေတြကို အဂၤလိပ္လို ဘယ္လို ေခၚမွန္းမသိလို႔ ရွာရခက္၊ အိမ္မွာ တရားနာဖို႔ဆိုရင္ တရားေတာ္ေတြက ဟိုတစ္ပိုင္း ဒီတစ္ပိုင္းျဖစ္ေနလို႔ ရွာရခက္၊ ပရိတ္၊ပ႒ာန္းရြတ္မယ္ဆိုျပန္ေတာ့လည္း စာအုပ္ေတြ က်န္ခဲ့လို႔ မရြတ္ရ ဆိုသလို… ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးေတြကို မၿငီးေငြ႕ေသးဘူးလား ေယာင္းတို႔ေရ.. တကယ္လို႔မ်ား အက္ဒ္မင္ေျပာခဲ့တဲ့ အျဖစ္ေတြထဲက တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုနဲ႔ ၾကံဳေနရၿပီဆိုရင္ေတာ့ ခု အက္ဒ္မင္ညႊန္းေပးမယ့္ Application ဟာ ေယာင္းအတြက္ပါပဲေနာ္…
Application နာမည္က သိမွတ္ဖြယ္ရာ သမုိင္းကမာၻပါတဲ့ ေယာင္းတို႔ေရ.. ဒီ App ထဲမွာဆိုရင္ ဘုရားသမိုင္းအေၾကာင္း၊ ၃၈ျဖာ မဂၤလာတရား၊ ေလာကနီတိအေၾကာင္း၊ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား၊ တရားေတာ္မ်ား ဆိုၿပီး Categoriesေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါဆို တစ္ခုခ်င္းစီအေၾကာင္းကို တစ္ခ်က္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္..
ဒီ Category မွာေတာ့ ပုဂံဘုရားေၾကာင္းေတြ၊ ေကလာသဆံေတာ္ရွင္ဘုရား သမိုင္းေၾကာင္းေတြ၊ ေရႊတီဂံုေစတီေတာ္ သမိုင္းေၾကာင္းေတြက စလို႔ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သမုိင္းေၾကာင္းအထိပါ အေသးစိတ္ေရးထားေပးေတာ့ အပ်င္းေျပ ပံုျပင္လို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း အဆင္ေျပ၊ ဗဟုသုတလည္း တိုးစရာပါပဲ။
၃၈ျဖာ မဂၤလာ တရားေတြကို အစအဆံုးရတဲ့သူ လက္ညွိဳးေထာင္ 😛 အက္ဒ္မင္ေတာ့ မရဘူးရယ္ :3 သိမွတ္ဖြယ္ရာ သမိုင္းကမာၻထဲမွာေတာ့ ဒီ မဂၤလာတရားေတာ္ေတြကို ဝတၱဳတိုေတြအျဖစ္ဖန္တီးၿပီး လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကို အေသးစိတ္ေျပာျပထားေတာ့ ျပန္ၿပီး ေလ့လာလို႔ ရေနပါၿပီရွင္.. ေမေမေယာင္းတို႔လည္း ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ေဘဘီေလးေတြကို ပံုျပင္ျပန္ေျပာျပလို႔ ရတာေပါ့.
ေလာကနီတိ ဆိုတာကေတာ့ ေလာကနီတိပါပဲရွင္ 😀 ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ လက္ဆင့္ကမ္းလာၾကတဲ့ လုပ္အပ္၊ မလုပ္အပ္တာေတြ၊ ဆံုးမစာေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားတာမို႔ ေလ့လာၾကည့္လို႔ ရတာေပါ့ေနာ္..
ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားဆိုတဲ့ Category ထဲမွာေတာ့ ပရိတ္ႀကီး ၁၁ သုတ္၊ ဘုရားပင့္၊ ၾသကာသဘုရားရွိခိုးနည္း၊ ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ၊ ဆယ္ပါးသီလ၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါး၊ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး၊ ပ႒ာန္း၊ ေမတၱာပို႔၊ အမွ်ေဝ၊ ဓမၼစၾကာ စတာေတြ ေဖာ္ျပေပးထားတာပါ။
ဒီ Category ထဲမွာေတာ့ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၊ ကိုးဘြဲ႔ရဆရာေတာ္၊ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ စတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕တရားေတာ္မ်ားကိုုရုပ္သံနဲ႔တကြ နာယူႏိုင္မွာပါ ေယာင္းတို႔ေရ.. နာမည္ႀကီးဆိုတဲ့ တရားေတာ္ေတြ အားလံုးနီးနီး ပါဝင္တာမို႔ တရားနာရတာ ဝါသနာထံုတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပမယ့္ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္ရွင္..
ကဲ.. ဒါဆို အေတာ္ေလးလည္း စံုသြားေလာက္ပါၿပီ။ ဒီ app ေလး ေဒါင္းလုတ္ဆြဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ Andriod ဖုန္းေတြအတြက္ ဒီလင့္ခ္ေလးမွာ ဆြဲလို႔ရပါတယ္ေနာ္.. ေယာင္းတို႔ဖုန္းထဲ ထည့္ထားတဲ့ App ေလးေတြအေၾကာင္းလည္း မွ်ေဝေပးခဲ့ပါဦးလို႔..
ထည့်ထားလိုက်ပါပြီရှင်.. ခုပဲ ဖုန်းထဲ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး ထည့်လိုက်ပါပြီ..
ဘုရားသမိုင်းတွေကို သိချင်ပြီဆို Google မှာ ခေါက်ရှာဖို့ကျတော့လည်း ပါဠိအသုံးအနှုန်းတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လို ခေါ်မှန်းမသိလို့ ရှာရခက်၊ အိမ်မှာ တရားနာဖို့ဆိုရင် တရားတော်တွေက ဟိုတစ်ပိုင်း ဒီတစ်ပိုင်းဖြစ်နေလို့ ရှာရခက်၊ ပရိတ်၊ပဋ္ဌာန်းရွတ်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်း စာအုပ်တွေ ကျန်ခဲ့လို့ မရွတ်ရ ဆိုသလို… ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကို မငြီးငွေ့သေးဘူးလား ယောင်းတို့ရေ.. တကယ်လို့များ အက်ဒ်မင်ပြောခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေထဲက တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနဲ့ ကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ ခု အက်ဒ်မင်ညွှန်းပေးမယ့် Application ဟာ ယောင်းအတွက်ပါပဲနော်…
Application နာမည်က သိမှတ်ဖွယ်ရာ သမိုင်းကမ္ဘာပါတဲ့ ယောင်းတို့ရေ.. ဒီ App ထဲမှာဆိုရင် ဘုရားသမိုင်းအကြောင်း၊ ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာတရား၊ လောကနီတိအကြောင်း၊ ပရိတ်တရားတော်များ၊ တရားတော်များ ဆိုပြီး Categoriesလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါဆို တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကို တစ်ချက် လေ့လာကြည့်ရအောင်..
ဒီ Category မှာတော့ ပုဂံဘုရားကြောင်းတွေ၊ ကေလာသဆံတော်ရှင်ဘုရား သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ ရွှေတီဂုံစေတီတော် သမိုင်းကြောင်းတွေက စလို့ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး သမိုင်းကြောင်းအထိပါ အသေးစိတ်ရေးထားပေးတော့ အပျင်းပြေ ပုံပြင်လို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေ၊ ဗဟုသုတလည်း တိုးစရာပါပဲ။
၃၈ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတွေကို အစအဆုံးရတဲ့သူ လက်ညှိုးထောင် 😛 အက်ဒ်မင်တော့ မရဘူးရယ် :3 သိမှတ်ဖွယ်ရာ သမိုင်းကမ္ဘာထဲမှာတော့ ဒီ မင်္ဂလာတရားတော်တွေကို ဝတ္တုတိုတွေအဖြစ်ဖန်တီးပြီး လူ့ကျင့်ဝတ်တွေကို အသေးစိတ်ပြောပြထားတော့ ပြန်ပြီး လေ့လာလို့ ရနေပါပြီရှင်.. မေမေယောင်းတို့လည်း ဖတ်ကြည့်ပြီး ဘေဘီလေးတွေကို ပုံပြင်ပြန်ပြောပြလို့ ရတာပေါ့.
လောကနီတိ ဆိုတာကတော့ လောကနီတိပါပဲရှင် 😀 ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ လက်ဆင့်ကမ်းလာကြတဲ့ လုပ်အပ်၊ မလုပ်အပ်တာတွေ၊ ဆုံးမစာတွေကို ဖော်ပြပေးထားတာမို့ လေ့လာကြည့်လို့ ရတာပေါ့နော်..
ပရိတ်တရားတော်များဆိုတဲ့ Category ထဲမှာတော့ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်၊ ဘုရားပင့်၊ သြကာသဘုရားရှိခိုးနည်း၊ ငါးပါးသီလ၊ ရှစ်ပါးသီလ၊ ဆယ်ပါးသီလ၊ ဘုရားဂုဏ်တော် (၉)ပါး၊ တရားဂုဏ်တော် (၆)ပါး၊ သံဃာ့ဂုဏ်တော် (၉)ပါး၊ ပဋ္ဌာန်း၊ မေတ္တာပို့၊ အမျှဝေ၊ ဓမ္မစကြာ စတာတွေ ဖော်ပြပေးထားတာပါ။
ဒီ Category ထဲမှာတော့ သီတဂူဆရာတော်ကြီး၊ ကိုးဘွဲ့ရဆရာတော်၊ ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ စတဲ့ ဆရာတော်ကြီးများရဲ့တရားတော်များကိုရုပ်သံနဲ့တကွ နာယူနိုင်မှာပါ ယောင်းတို့ရေ.. နာမည်ကြီးဆိုတဲ့ တရားတော်တွေ အားလုံးနီးနီး ပါဝင်တာမို့ တရားနာရတာ ဝါသနာထုံတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အတော်လေး အဆင်ပြေမယ့် အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်ရှင်..
ကဲ.. ဒါဆို အတော်လေးလည်း စုံသွားလောက်ပါပြီ။ ဒီ app လေး ဒေါင်းလုတ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင် Andriod ဖုန်းတွေအတွက် ဒီလင့်ခ်လေးမှာ ဆွဲလို့ရပါတယ်နော်.. ယောင်းတို့ဖုန်းထဲ ထည့်ထားတဲ့ App လေးတွေအကြောင်းလည်း မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးလို့..
ထည့ျထားလိုကျပါပွီရှငျ.. ခုပဲ ဖုနျးထဲ ဒေါငျးလုတျဆှဲပွီး ထည့ျလိုကျပါပွီ..
ဘုရားသမိုငျးတှကေို သိခငြျပွီဆို Google မှာ ခေါကျရှာဖို့ကတြော့လညျး ပါဠိအသုံးအနှုနျးတှကေို အငျ်ဂလိပျလို ဘယျလို ခေါျမှနျးမသိလို့ ရှာရခကျ၊ အိမျမှာ တရားနာဖို့ဆိုရငျ တရားတောျတှကေ ဟိုတဈပိုငျး ဒီတဈပိုငျးဖွဈနလေို့ ရှာရခကျ၊ ပရိတျ၊ပဋ်ဌာနျးရှတျမယျဆိုပွနျတော့လညျး စာအုပျတှေ ကနြျခဲ့လို့ မရှတျရ ဆိုသလို… ဒီလိုအဖွဈမြိုးတှကေို မငွီးငှေ့သေးဘူးလား ယောငျးတို့ရေ.. တကယျလို့မြား အကျဒျမငျပွောခဲ့တဲ့ အဖွဈတှထေဲက တဈခုမဟုတျ တဈခုနဲ့ ကွုံနရေပွီဆိုရငျတော့ ခု အကျဒျမငျညှှနျးပေးမယ့ျ Application ဟာ ယောငျးအတှကျပါပဲနောျ…
Application နာမညျက သိမှတျဖှယျရာ သမိုငျးကမ်ဘာပါတဲ့ ယောငျးတို့ရေ.. ဒီ App ထဲမှာဆိုရငျ ဘုရားသမိုငျးအကွောငျး၊ ၃၈ဖွာ မငျ်ဂလာတရား၊ လောကနီတိအကွောငျး၊ ပရိတျတရားတောျမြား၊ တရားတောျမြား ဆိုပွီး Categoriesလေးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါဆို တဈခုခငြျးစီအကွောငျးကို တဈခကြျ လေ့လာကွည့ျရအောငျ..
ဒီ Category မှာတော့ ပုဂံဘုရားကွောငျးတှေ၊ ကလောသဆံတောျရှငျဘုရား သမိုငျးကွောငျးတှေ၊ ရှှတေီဂုံစတေီတောျ သမိုငျးကွောငျးတှကေ စလို့ မငျးကှနျးဆရာတောျဘုရားကွီး သမိုငျးကွောငျးအထိပါ အသေးစိတျရေးထားပေးတော့ အပငြျးပွေ ပုံပွငျလို ဖတျခငြျတယျဆိုရငျလညျး အဆငျပွေ၊ ဗဟုသုတလညျး တိုးစရာပါပဲ။
Related Article >>> စာကွမျးပိုးယောငျးယောငျးလေးတို့ရဲ့ ဖုနျးထဲမှာ မဖွဈမနေ ရှိထားသင့ျတဲ့ Application (၃) ခု
၃၈ဖွာ မငျ်ဂလာ တရားတှကေို အစအဆုံးရတဲ့သူ လကျညှိုးထောငျ 😛 အကျဒျမငျတော့ မရဘူးရယျ :3 သိမှတျဖှယျရာ သမိုငျးကမ်ဘာထဲမှာတော့ ဒီ မငျ်ဂလာတရားတောျတှကေို ဝတ်တုတိုတှအေဖွဈဖနျတီးပွီး လူ့ကငြ့ျဝတျတှကေို အသေးစိတျပွောပွထားတော့ ပွနျပွီး လေ့လာလို့ ရနပေါပွီရှငျ.. မမေယေောငျးတို့လညျး ဖတျကွည့ျပွီး ဘဘေီလေးတှကေို ပုံပွငျပွနျပွောပွလို့ ရတာပေါ့.
လောကနီတိ ဆိုတာကတော့ လောကနီတိပါပဲရှငျ 😀 ယဉျကြေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမျးအရ လကျဆင့ျကမျးလာကွတဲ့ လုပျအပျ၊ မလုပျအပျတာတှေ၊ ဆုံးမစာတှကေို ဖောျပွပေးထားတာမို့ လေ့လာကွည့ျလို့ ရတာပေါ့နောျ..
Related Article >>> ယောငျးတို့ရဲ့ နေ့စဉျဘဝကို ကနြျးမာလှပစမေယ့ျ Application (၃) ခု
ပရိတျတရားတောျမြားဆိုတဲ့ Category ထဲမှာတော့ ပရိတျကွီး ၁၁ သုတျ၊ ဘုရားပင့ျ၊ သွကာသဘုရားရှိခိုးနညျး၊ ငါးပါးသီလ၊ ရှဈပါးသီလ၊ ဆယျပါးသီလ၊ ဘုရားဂုဏျတောျ (၉)ပါး၊ တရားဂုဏျတောျ (၆)ပါး၊ သံဃာ့ဂုဏျတောျ (၉)ပါး၊ ပဋ်ဌာနျး၊ မတေ်တာပို့၊ အမြှဝေ၊ ဓမ်မစကွာ စတာတှေ ဖောျပွပေးထားတာပါ။
ဒီ Category ထဲမှာတော့ သီတဂူဆရာတောျကွီး၊ ကိုးဘှဲ့ရဆရာတောျ၊ ဒေါကျတာနန်ဒမာလာဘိဝံသ စတဲ့ ဆရာတောျကွီးမြားရဲ့တရားတောျမြားကိုရုပျသံနဲ့တကှ နာယူနိုငျမှာပါ ယောငျးတို့ရေ.. နာမညျကွီးဆိုတဲ့ တရားတောျတှေ အားလုံးနီးနီး ပါဝငျတာမို့ တရားနာရတာ ဝါသနာထုံတဲ့သူတှအေတှကျတော့ အတောျလေး အဆငျပွမေယ့ျ အနအေထားမှာ ရှိပါတယျရှငျ..
ကဲ.. ဒါဆို အတောျလေးလညျး စုံသှားလောကျပါပွီ။ ဒီ app လေး ဒေါငျးလုတျဆှဲခငြျတယျဆိုရငျ Andriod ဖုနျးတှအေတှကျ ဒီလင့ျချလေးမှာ ဆှဲလို့ရပါတယျနောျ.. ယောငျးတို့ဖုနျးထဲ ထည့ျထားတဲ့ App လေးတှအေကွောငျးလညျး မြှဝပေေးခဲ့ပါဦးလို့..
Tags: Application, buddha, dhamma, history, Knowledge, Mp4, myanmar, Respect, Summer